China pp hollow layer pad Mugadziri uye Mutengesi | Sihai
P corrugated sheet inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji, iyo padhi padhi rakasiyana saizi pp isina mhango pepa yezvigadzirwa zvakaparadzaniswa nekutakura bhokisi, mapallet uye vamwe kurongedza. Iyo yakatetepa pad ndeyeh isina mhango pepa zvinoenderana zvakasiyana zvigadzirwa, zvakasiyana kurongedza zvigadzirwa zvakagadziriswa saizi uye chimiro cheakasiyana uye chengetedza zvigadzirwa pakurongedza nekutakura. Inoshandiswa zvakanyanya kushandiswa mumabhodhoro ekuputira uye kutumira, storages, imba yekuchengetera, zvigadzirwa zvakapatsanurwa, magaba storages, magaba ekutumira uye mamwe mabhodhoro emabhokisi ekurongedza.
Iyo padhi padhi yakanakira zvakafanana ne p mhango jira, ihwo huremu hwakareruka, husina mvura, hunogara, hwakasimba, yunifomu ukobvu, kumeso kwepamusoro, kwakanaka kupisa kupisa, kwakasimba kwemaoko, kwakasimba kwemakemikari kugadzikana uye kuputira kwemagetsi, isina-chepfu hunhu. Inogona kunge iri maererano neshanduro dzakasiyana wedzera ESD zvinhu zvakagadzirwa ESD pp isina mhango pepa padhi, wedzera UV zvinhu zvakagadzirwa UV kudzivirira mapaji erata pepa pad yekushandisa kwekunze, inogona kugadzirwa yakaitwa saizi yakasiyana, chimiro chakasiyana chezvigadzirwa zvakasiyana.
Pashure: pp isina mhango bhodhoro rukoko pad
Zvadaro: pp isina mhango jira sirika rinotenderera rakatenderera pad
Mapeji Corrugated Sheet Rukoko Pad
P Chigadziko Pad
pp chemarata wedenga pad yemabhodhoro, magaba stora ...